Nay Nyo Chan: Lesson-6-Houses and Apartments
ခန်းတွဲက ငါးထပ်တိုက် အပေါ်ဆုံးအထပ်မှာလေ။ သမုဒ္ဒရာကိုလှမ်းမြင်ရတဲ့ လသာဆောင်လည်း ပါတယ်။
အမိုးပေါ်ကနေ ကောင်းကင်ကို နောက်ခံပြုထားတဲ့ မြို့အဆောက်အအုံများရဲ့ အနားသတ်မျဉ်းရဲ့ ရင်သက်ရှုမောဖွယ် မြင်ကွင်းကို ကျွန်တော်တို့ မြင်ခဲ့ရတယ်။
were rather cramped
ခန်းတွဲက လောလောဆယ်ကမှ ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံထား၊ ပရိဘောဂတွေနဲ့ဆင်ယင်ထားတယ်။ ဒါကြောင့် ကုတင်၊ စားပွဲ စတဲ့ ပရိဘောဂတွေနဲ့ ရေခဲသေတ္တာ၊ လျှပ်စစ်မီးဖို စတဲ့ အိမ်တွင်းသုံး စက်ပစ္စည်းတွေ ရှိနေတာပေါ့။
ကျွန်တော်တို့က ဧည့်ခန်းကျယ်မှ သဘောကျတာ ဒါပေမယ့်လေ အိပ်ခန်းတွေ အရမ်းသေးနေတော့ အဆင်မပြေဘူးပေါ့။ အဲဒီမှာ တစ်လလောက်နေရရတာ သိပ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမယ့် ခရီးအဆုံးမှာ တော့ အိမ်ကိုအလွမ်းသည်ရတော့တာပဲ။ လွမ်းတယ်ဆိုတာ အိမ်မှာရှိခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ကို ပြန်လည်လွမ်း ဆွတ်လာပြီး ၀မ်းနည်းလာတဲ့အချိန်ပဲပေါ့ဗျာ။
ကျွန်တော် ကိုယ်ပိုင်နေရာလေးတော့ ရှိချင်တယ်၊ လတိုင်း ငှါးရမ်းခတွေနဲ့ ငွေတွေ မဖြုန်းဖြစ် သွားအောင်လို့ပေါဗျာ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်မြို့မှာက ဈေးနှံးသင့်တဲ့ နေအိမ်တို့၊ တိုက်ခန်းတို့က တကယ့်ကို နည်းလာပြီလေ။ လူချမ်းသာတွေနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအ၀န်းမှာ မနေတောင်မှ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ဆို အိမ်ဝယ်ဖို့ဘဏ်ကနေ ချေးငွေ ယူနေရအုံးမှာပဲ။ ဒါတောင် အဲဒီချေးငွေကို ပြန်ဆပ်ဖို့ ဆိုတာ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ နှစ်သုံးဆယ်ကျော်နေအုံးမှာပဲလေ။
ဒါပေမယ့် အခုထိတော့ ပထမအရစ်ငွေချေဖို့အတွက် ပိုက်ဆံစစုရတော့မယ်။ တစ်နေ့နေ့ နေရာအသစ်ကို ပြောင်း ရွှေ့နေထိုင်တဲ့အခါ အိမ်တက်မင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပပေးရမှာပေါ့ဗျာ။
4. I was having so much fun during my semester abroad that I didn't feel cramped / homesick /housewarm at all.
9. We're going to needamore short-term / spacious/widespread apartment now that we're going to haveababy.
10. We're regenerating / rejuvenating / remodeling the bathroom, so you'll have to use the one on the second floor.
Posted by Nay Nyo Chan at 8:21 PM